Madaxweynaha oo ka qeybgalay tukashada salaadda Janaasada ee Marxuum Burci – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha oo ka qeybgalay tukashada salaadda Janaasada ee Marxuum Burci
MAREEG 28 June 2016
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta ka qeybgaley tukashada salaadda jannaasada ee Marxuum Xildhibaan Burci Maxamed Xamza oo dhowaan ku shahiiday weerarkii waxashnimada ahaa ee argagixisada ku qaadeen mid ka mid ah hoteellada magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa salaadda jannaasada kaddib mid mid u gacan qaadey ehelada iyo qoyska marxuumka, isagoo mar kale uga tacsiyeeyay geerida ku timid Marxuum Burci oo sidoo kale ahaa Wasiiru Dowlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ee Arrimaha deegaanka.
Waxaa sidoo kale tukashada salaadda jannaasada ee Marxuum Burci Maxamed Xamza ka qeybgaley Guddoomiyaha Baarlamaanka, Mudane Maxamed Cusmaan “Jawaari”, Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Dowladda Federaalka, Mudane Maxamed Cumar Carte, xubno ka tirsan labada gole iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweynaha oo martiqaad ku saabsan ka qeybgalka Shir Madaxeedka Jaamacadda Carabta ka helay Madaxweynaha Mauritania (Sawirro)
Booliska Somalia oo fashiliyey qarax lagu diyaariyey hareeraha wadada Maka Al-Mukarama